Iindaba -Ukugqunywa kodonga lwePVC kunokuba kuhle kakhulu!
Ukususela kumaxesha amandulo, ukufuna koluntu “ubuhle” akuphelanga. Kwasekupheleni kwamaXesha Aphakathi ukuya ekuqaleni kwenkulungwane ye-18, izidwangube zaseSweden kunye nabarhwebi abazizityebi baqalisa ukusebenzisa izigqubuthelo zodonga njengemihombiso yangaphakathi. Izitayile yayizimbozo zodonga lwekhesmere, ezogqunywe ngodonga eGobelin, kunye nokwakha. Izimbozo zodonga lwesikhumba, isigqubuthelo sodonga lwe-velvet, njl njl, ukubonisa ubunini babo. Emva kwexesha, ukugqunywa eludongeni okulingisiweyo (amalaphu ekotoni) kuye kwaduma phakathi kwabahlali kwaye baba ngumsindo.
Kule mihla, ngenkqubela phambili yetekhnoloji yokuvelisa, iintlobo zodonga lwephepha lodonga ziyaqhubeka ukwanda. Ngedangatye layo elidodobalayo, elwa neentsholongwane, ukungunda, ukungangeni manzi kunye nemisebenzi yokuthintela ukungcola, ukugquma eludongeni kwe-PVC kulungelelaniswe ngakumbi neemfuno zeendawo ezahlukileyo kwaye kuhlangatyezwane neemfuno zabantu bale mihla.Imfuno ebonakalayo yesakhiwo idala indawo eshushu, ekhululekile kwaye esempilweni yabantu. , engenakulinganiswa nezinye izinto zokuhombisa eludongeni.
Nangona kunjalo, abanye abantu ngokuqhula bathi isigqubuthelo sodonga lwePVC asinakuba "yifashoni esezindongeni" kwiindonga, kuba umbono wokuqala woluntu ngesigqubuthelo sodonga lwe-PVC kukusebenza kwayo.
1. "Eyodwa" yePVC yokugubungela udonga
Imibala embossing enemibala emithathu kunye nemibala ephezulu yokugcwala eveliswe ngogquma lwePVC eludongeni alunakuthelekiswa nanto ngezimbo zemveli ezinamatheleyo kunye nodonga. Izigqubuthelo zodonga lwe-PVC zinokudityaniswa kunye neepateni ezintle-ntathu kunye neepateni ezimibalabala ukwenza umphezulu othe tyaba. Iziphumo ezibonakalayo zokugubungela udonga azinakufikelela
Izigqubuthelo zodonga lwe-PVC ziqengqeleka zii-roller, ezinokudibanisa iipateni ezahlukeneyo, izinto ezahlukeneyo, kunye nemibala eyahlukeneyo. Xa kuthelekiswa nezinto zokugubungela eludongeni olunye kuphela ezenza utshintsho kwiipateni, ukugqunywa kodonga lwePVC kunokuvelisa iimilo ezizezona zityebileyo kunye noyilo, uninzi lweehotele eziphezulu ziya kukhetha ukugquma eludongeni kwePVV njengezinto zokuhombisa udonga.
2. Isambatho sodonga lwePVC sinokugcina "ubutsha ngonaphakade"
Imvakalelo yokuqala ibalulekile, kodwa ebaluleke ngakumbi yindlela yokugcina obu "buhle". Kwixesha emva kokuba ulwakhiwo lugqityiwe, uninzi lokugqunywa eludongeni kuya kuba neengxaki ezinje ngokuguga kwezinto kunye nombala. Xa kuthelekiswa nezinye iintlobo zokugubungela eludongeni, ukugquma eludongeni kwePVC, iifilimu zekhalenda ezixineneyo zePVC kunokugcina ngcono "ulutsha", kwanasemva kwexesha elide lokusetyenziswa, basenayo imibala yoqobo kunye nemibala eqaqambileyo. Kukwanazo neenzuzo zokungangeni manzi, zokuthintela ukungcola emanzini kunye nokucoca amanzi
3. Isigqubuthelo sodonga sePVC silungele iimeko ezininzi
Iihotele ezininzi, iindawo zokuzonwabisa, iivenkile zokutyela, iivenkile zokutyela kunye nezakhiwo zeofisi ngokusisiseko bakhetha ukusebenzisa ukugquma eludongeni kwePVC ukuhombisa udonga lwangaphakathi. Abanye abaphuhlisi bade bathengise iipropathi zokuhlala eziphezulu, izakhiwo zeeflethi, kunye nezakhiwo zeofisi emva kokuba zihonjiswe ngodonga lwePVC.